छोराछोरीलाई सुन्तला ल्याइदिँदैछु भनेका श्रीमानको १७ दिन पछि जंगलमा कु हि एको अवस्थामा श’ व फेला, एक महिला पक्राउ (भिडियो हेर्नुस्) – Sidha Kura
मुख्य पृष्ठ /भिडियो/छोराछोरीलाई सुन्तला ल्याइदिँदैछु भनेका श्रीमानको १७ दिन पछि जंगलमा कु हि एको अवस्थामा श’ व फेला, एक महिला पक्राउ (भिडियो हेर्नुस्)
छोराछोरीलाई सुन्तला ल्याइदिँदैछु भनेका श्रीमानको १७ दिन पछि जंगलमा कु हि एको अवस्थामा श’ व फेला, एक महिला पक्राउ (भिडियो हेर्नुस्)
काठमाडौ । बांके जिल्लाको राप्ती सोनारी गाउँपालिका वडा नं २ का २८ वर्षीय हेमराज खत्री वेपत्ता भएको १९ दिन पछि जंगलमा निधन भएको अवस्थामा फेला परेका छन् । उनको निधनमा कान्छी श्रीमतीको हा त रहेको भन्दै स्थानिय र जेठी श्रीमतीले आ रो प लगाएका छन् । हेमराजको परिवारको गाडी थियो । गाडीवाट आएको आम्दानी पनि कान्छी श्रीमतीले नै उडाएको जेठीको आ’रो’प छ ।
श्रीमानले कान्छी श्रीमती बनाएर ल्याएको श्याम कुमारी चौधरी माथि छानविन गर्नुपर्ने माग जेठी श्रीमतीले गरेकी छन् । उनले गो’ प्य रुपमा हेमराजलाई श्रीमान भन्ने तर समाजको अगाडी न भ नेर लुक्दै हिडेको पनि दा वी जेठी श्रीमतीको छ । श्रीमानले संयुक्त बैंक खाता बनाएर चार लाख रुपैया दिएको आफुलाई थाहा भएको बताएकी छन् ।
श्रीमानले सोही दिन फोन गरेर छोराछोरीलाई सुन्तला ल्याइदिदै छु, औषधी किने, बाइकमा पेट्रोल हाले म नआउँदा सम्म चल्लालाई खान नदिनु भनेर श्रीमतीलाई भनेको बताइन् । उनले ठूलो ऋण लाग्दा र ठूलो स म स्या पर्दा पनि दे ह त्याग नगरेको श्रीमानले अहिले दे ह त्याग गर्नै नसक्ने बताएकी छन् । श्यामकुमारीलाई छोडेर भारत गएका उनलाई कान्छी श्रीमतीले फोन गरेर पैसा मागेको र पैसा दिएपछि म तिमीलाई छोडिदिन्छु भने पछि श्रीमानले पैसा पठाइदिएको उनको भनाई छ ।
कुखुराको चल्लाको औषधी किन्न भनेर घरवाट निस्केका उनी १९ दिन पछि मृ त फेला परेका थिए । उनका दुई औँला खसेको अवस्थामा र उनले चढेको मोटरसाइकल सय मिटर पर फेला परेको छ । उनको अरु कसैले ज्या न लि एको आरोप परिवारका सदस्यको छ । घ ट नास्थलमा चाउचाउको दुईवटा खोल र केही सुन्तला समेत फेला परेको छ ।
उनी कान्छी श्रीमती श्यामकुमारी चौधरीलाई भेट्न भन्दै निस्किएको गाउँलेको भनाई छ । उनी हराएको दिन घरमा भएकी जेठी श्रीमतीसंग उनले दुई पटक कुरा गरेको प्र माण छ भने कान्छी श्रीमतीसंग ५३ पटक कुरा गरेको देखिएको छ । आखिर उनले कान्छी श्रीमतीसंग किन त्यती धेरै पटक कुराकानी गरे ? प्रश्न स्थानियले र हेमराजको परिवारले लगाएको छ । सो घटनामा प्रहरीले उनको कान्छी श्रीमती भनिएकी श्यामकुमारी चौधरीलाई अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरेको छ ।
पूजाको Birthday मा आकाशले घरमै गएर गरे यस्तो वाचा दिए मम्मीले आफुलाई ज्वाईं चाहिको भनेपछि ….(भिडियो हेर्नुस् )
बिबाह बन्धनमा बाधिदै भद्रगोलका बले र टिकटक गल प्रिज्मा यो मितिमा हुँदैछ बिहे। (हेर्नुहोस् भिडियो)
बेहुलीको यस्तो हर्कत देख्दा सबै जन्तीहरु तिन छक्क परे – हेर्नुहोस यस्तो रमाइलो भिडियो